Bribing is a sin
Jah🇿🇼Tsvarie-07 3 days ago
Vachipedza kusunga ivavo matorero avanozoita mari ari worse 😂 apo kurasisa vavengi chete...
TnapaH 3 days ago
Kuendeswa kujeri nekuda kwepondo
obsever 3 days ago
l believe mapurisa havachadi uwori. ngatifareyi nyaya yeuwori yatopera
T@aaa 3 days ago
But hazvisi fair havana mhosva vanhu avo nguva yose iyi vaitambira vaifanira kutanga vasunga mapurisa acho ndovanehuori
This is nothing we want to hear people like July MIUI getting arrested . Not to arrest those whom yu purport to have political confrontation
Disposable Diaper 3 days ago
We yekuita sei??
maikoro 3 days ago
ko dai yaidarika $5.. zviri kunzi nemapurisa wedzerai Mari isvike pa$10. $2 kana $5 haiite.... Asante sana
VYBZ KARTEL 3 days ago
Something fishy about the convit names it's like they are from a drama
Gokwe citizen 3 days ago
asi mapurisa akawedzerwa mari here marambiro avakuita chioko muhomwe haasi ega?
📡 3 days ago
👽 3 days ago
paroad block panga panemukuru chete